धुलोधुवाँको प्रदूषणले छालामा कस्तो असर गर्छर? कसरी जोगिने ? डा. सविना भट्टराईको उत्तर
असार ४, २०७४ आइतवार २३:१५:०० प्रकाशित
धुलोधुवाँको प्रदूषणले हाम्रो शरीरको बाहिरी अंग छालालाई सबैभन्दा बढी हानी गर्छ। माथि उल्लेखित सबै प्रदूषणले ‘रियाक्टिभ अक्सिजन पिसिज’ हानिकारक तत्व उत्पादन गर्छन्। यसले हाम्रो छालामा हुने डिएनए अर्थात् छालाका कोषहरु नाश गरिदिन्छ।
कोषहरुमा यसले असर पारेसँगै छालामा सुख्खापन बढ्ने, एलर्जी हुने, चिलाइरहने समस्या आउँछ। प्रदूषणले छालालाई एकदमै संवेदनशील बनाइदिने भएकाले खस्रो हुने, चायापोतो वा चायापोतो जस्तै देखिने रङ्गीबिरङ्गी दागहरु आउने लगायतका समस्या देखा पर्छन्।
धुवाँधुलोमा लामो समय रहनुपर्‍यो भने छालाका केही दीर्घ समस्या देखिन थाल्छन् त्यसमा चाउरी पर्ने, बुढ्यौलीका संकेत देखिने, डन्डिफोर आइरहने हुन्छ। छालालाई मात्रै होइन, कपाललाई पनि यसले असर गर्छ। कपाल सुख्खा हुने, झर्ने, टुक्रिने आदि समस्या वायु प्रदूषणको उपज हुनसक्छ।
अहिले हामीकहाँ धेरैजसो बिरामी अनुहार चिलाउने र अनुहारमा टाटेपाटे दाग आउने समस्या लिएर आइरहेका छन्। यसैगरी पूरै शरीर चिलायो भनेर उपचार खोज्नेको संख्या पनि अघिल्ला वर्षभन्दा बढेको छ।
पहिले युवाहरुमा यस्ता छालाजन्य समस्या कम देखिन्थे । तर अहिले उनीहरुलाई पनि जिउ चिलाउने र अनुहारमा पोतोजस्ता कालो धब्बाहरु आउने गरेको प्रसस्त उदाहरण छन्। यो प्रदूषणकै कारण बढेको हो ।
धुलोधुवाँबाट जोगिनका लागि सकेसम्म शरीरका सबै भाग छोपिने खालका लुगा लगाउनुपर्छ। यति गर्दा पनि अनुहार र हातका केही भाग खुलै रहन्छन्। त्यसका लागि अनुहारमा मास्क लगाउन सकिन्छ। बाहिर निस्किँदा सनग्लास लगाउने र सनब्लक क्रिम प्रयोग गर्ने। सनब्लकको निरन्तर प्रयोगले घामका विकिरणबाट जोगाउने मात्रै नभई धुवाँधुलोलाई सिधै छालासम्म पुग्नबाट पनि रोक्छ। यसले छालाबाहिर एउटा तह बनाउँछ। धुलोधुवाँ त्यहीँ टाँसिएर बस्छ र छालामा हानी पुर्‍याउन सक्दैन।
बाहिरबाट घर पुगेपछि सकेसम्म सधैंँ ‘क्लिन्जर’ लगाएर मुख धुने गर्नुपर्छ । मेकअप गरिएको छ भने तुरुन्तै मेकअप उतारेर सकेसम्म ‘मोस्चराइजर’को प्रयोग गर्नु राम्रो। यस्तै पानी प्रसस्त पिउने बानी बसाल्नु जरुरी छ । छालाका लागि लाभदायक एन्टिअक्सिडेन्ट तत्व भएका गोलभेँडा, अंगुर र कागतीको सेवन बढाउनुपर्छ।
छालामा रहने कोषहरुलाई प्रदूषणको प्रभावबाट चाँडै पराजित हुन नदिन फलफूलको सेवन लाभदायक हुनेछ। फलफूलमा हुने तत्वले त्यसविरुद्ध लड्ने शक्ति आर्जन गर्न मद्दत गर्छ। फूलफूलमा पनि आँप, सुन्तला, मेवाजस्ता रङ्गीन फलफूल खानु फाइदाजनक मानिन्छ।
छालालाई सदा सुन्दर र मुलायम बनाइराख्न नुहाउँदा र अनुहार धुँदा एकदमै नरम खालको स्याम्फु, साबुन र क्लिन्जिरको प्रयोग गर्नुपर्छ।
-डा. सविना भट्टराई, डर्म्याटोलोजिस्ट